Zinedine Zidane oo ka tagi kara Real Madrid si uu Tababare ugu noqdo Kooxda weyn ee… – Gool FM
(Madrid) 08 Maajo 2021. Sida wararku ay sheegayaan Tababare Zinedine Zidane ayaa ka tagi kara Kooxdiisa Real Madrid si uu Macallin ugu noqdo koox weyn oo ka dhisan dalka Talyaani.
Jariiradda Tuttosport ayaa warinaysa in Macallin Zinedine Zidane uu beddel u noqon karo Andrea Pirlo si uu uga beddelo xilka Tababarennimo ee Kooxda Juventus.
Macallinka reer France ayaa la filayaa inuu ka tagi doono kooxda Real Madrid kaddib markii laga soo reebay tartanka Champions League, halka sidoo kale cadaadisku uu ku sii kordhayo Tababaraha Juventus ee Pirlo.
Zidane ayaa laga yaabaa inuu waqti fasax ah ka qaato ciyaarta ka hor inta uusan qaban koox cusub, laakiin fursad uu ugu laabto Magaalada Turin ayaa noqon karta mid aad u xiiso badan oo aannu dhaafi karin.
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ayaa 214 kulan u ciyaaray Kooxda Juventus intii u dhaxeysay 1996 iyo 2001, isagoo u dhaliyay 31 gool, isla markaana kula guuleystay labo horyaal oo Serie A ah, sidoo kalena la gaaray labo final oo Champions League ah.